UMNYANGO wezokuThuthukiswa koMphakathi eGreytown Service Office ucela ukufuniswa laba abalandelayo:
>Ubaba nomama kaMinenhle Msomi noThabiso Msomi abazalwa nguMbali Msomi noThemba Brian Ngubo abaziwa bayaphi abaseMuden. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle Nksz X. Mthembu kulenombolo 033 417 1527.
>Ubaba ka-Amkekelwe Sithole ozalwa uLamulile Sithole osewadlula emhlabeni owayehlala eMuden endaweni yase Emjintini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u X.M Mthembu kulenombolo 033 417 1527.
>The Suid Afrikaanse Vroue Federasie (SAVF) Social Services in Msinga is looking for anyone with information about Sphiwe Zuma from Machunwini area who is a father of Sizwe Sikhakhane born on 02/08/2002 by the late Thandazile Sikhakhane in Msinga High area to contact social worker N.R Nkomo on 033 493 0445 during office hours.
>Ihhovisi lezokuThuthukiswa koMphakathi eMsinga licela ukufuniswa uSphiwe Zuma onguyise kaSizwe Skhakhane owazalwa ngo 02/08/2002 emthola ku Thandazile Skhakhane ongasekho wase Msinga High indawo. Onolwazi angathintana nosonhlalakahle uNkk N.R Nkomo kulenombolo elandelayo 033 493 0445.
Daily Lotto: Sunday's results 51 minutes ago Click here for the full list of lottery results